Dhacdo.com - News: Xarakada Al shabaab oo ku fir-fircoon dhaq dhaqaaqa magaaladda Muqdisho “Warbixin Culus”
16,331,213 unique visits
Xarakada Al shabaab oo ku fir-fircoon dhaq dhaqaaqa magaaladda Muqdisho “Warbixin Culus”
Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin waa awoodda kaliya ee u babac dhigi karto xukuumada kmg ee Soomaaliya, iyadoo ay iminka u muuqdaan, kuwo si’aad ah ugu soo dhawaaday qeybaha ay magaaladda Muqdisho kaga sugan tahay dowladda kmg ee Soomaaliya.
Xarakada Al shabaab ayaa si’aad ah dhaq dhaqaaqyada ka jira magaaladda Muqdisho uga wanaagsan dowladda kmg ee Soomaaliya, iyadoo ay dowladdu leedahay ciidamo xoogan oo awood iyo khibrad-ba leh, balse dhibaatada dowladda heysata ayaa waxay tahay, iyadoo aanan wax mushaaraad ah siinin ciidamadeyda, taa oo keentay inay ciidamo badankoodu ka seexdeyn marka ay magaaladda Muqdisho ka soconaayaan dagaalo xoogan.
Al shabaab ayaa la-sheegay inay dhaqaalo xoogan ka helaan xoogaga ajaaniib ah ee ka dhinac dagaalamaaya, kuwaa oo qaarkood lagu eedeeyay inay xiriiro kala duwan, ay la-lee yihiin kooxda tunka weyn ee Al Qacida.
Sidoo kale Xarakada Al shabaab ayaa waxay dhaqaalo xoogan ka heshaa deegaanadda ay gacanta ku heyso, iyadoo ay taasi keentay in ciidamadda Xarakada ay badankoodu helaan mushaaraadkooda, isla-markaana waxaa jira qaar iyagu rumeysan inay u adeegayaan Diinta Islaam-ka, waxayna sheegeyn inaysan dooneyn wax mushaaraad ah, bacdamaa ay iyagu is-bixin karaan.
Ciidamadda Mujaahidiinta ee Al shabaab ayaa waxay badankoodu rumeysan yihiin inay Jihaad kula jiraan dowladda kmg ee Soomaaliya, iyadoo ay horey shaaca uga qaadeyn culimada Soomaaliyeed, in dagaaladda ka soconaaya magaaladda Muqdisho uusan aheyn Jihaad balse ay yihiin kuwo fidno ah.
Dhanka kale ciidamadda Xarakada Al shabaab ayaa waxay awood u lee-yihiin inay u kala talaabaan dacalada magaaladda Muqdisho, iyagoo iska dhigaaya inay yihiin shacab, balse ciidamadda dowladda ayaanan taasi awoodin, bacdamaa deeganada ay ka taliyaan xoogaga hubeysan, aysan shacabku ku badneyn, taa oo keentay in labada qof ee deeganadaasi ku wada nool ay si wanaagsan isku garanayaan, ruuxii soo dhex galaana uu uga soocan yahay.
Si kastaba ha’ahaatee xoogaga hubeysan ayaa si’aad ah ugu soo dhawaanaaya goobaha ay dowladdu kaga sugan tahay magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, talaabo walba oo ay qaado dowladda ayay ku fashilmataa.
New York on August 01 2010 05:46:58 ·
0 Comments · 971 Reads